How'd it happen and more reports?: အလွန်အသက်အန္တရယ်များတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး (Dengue)! ၄၈နာရီကျော်သွားရင် အသက်ရှင်ဖို့ခဲရင်းတယ်တဲ့!
အလွန်အသက်အန္တရယ်များတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး (Dengue)! ၄၈နာရီကျော်သွားရင် အသက်ရှင်ဖို့ခဲရင်းတယ်တဲ့!
ကျွှန်တော်လဲ အခုစာဖတ်ပြီးမှ ဒီသွေးလွန်တုန်ကွေးအကြောင်း အသေအချာသိရတာပါ၊ အရမ်းကို ပေါ့သိပေါဆနိုင်ပါတယ်၊ ပုံမှန်ဖျားတာဘဲသိထားလို့ပါ၊ ဒါကြောင့် အမိမြန်မာပြည်ကလူတွေကို ပညာပေးအနေနှင့် မသိသေးသူတွေ သိရအောင် ပြန်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်...
အခုတလော ကမ္ဘာ့အသန့်ရှင်းဆုံးမြိ်ု့ဖြစ်တဲ့စကာင်္ပူမှာလဲ ဒီနှစ်ထဲ ဇွန်နောက်ဆုံးအပတ်ထိ ၁၀,၉၆၀ဦး သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီး ၂ဦးသေတယ်တဲ့ သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့နှုံးများနေလို့ လူထုတွေအော်သံ တွေ သတင်းစာထဲမှာတွေ့နေပါတယ်၊ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာအများဆုံး ၁၄,၂၀၉ဦးသွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီး ၂၅ဦးထိသေတယ်ဖူးတယ်တဲ့!
ဒီလောက်ခြင်ပေါတဲ့ ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်နေတဲ့ အမိမြန်မာပြည်မှာ သွေးလွန်တုတ်ကွေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ဆေးရုံတက်၍ဆေးကုသခံခဲ့သူတွေရဲ့စာရင်းက အရမ်းကိုနည်းလွန်းပါတယ်၊ အပြင်မှာ ကြိုက်ကုသမှုများ နေတာနှင့် ဘာမှမသိကျတာလဲပါမှာပေါ့လေ!
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူထားသော စာရင်းများအရ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးတွင် သွေးလွန် တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူ လူကြီး၊ ကလေး စုစုပေါင်း ၈,၈၆၉ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၁၆ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဌာနစိတ်မှ သိရသည်။
မနှစ်က တနှစ်လုံးမှာမှ ၁,၁၄၄ ယောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကုန်အထိ ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် တက်ရောက် ဆေးကုသခံခဲ့သူ ၁,၇၂၇ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၇ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပါက ငွေအတွက်မပူဘဲ ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ အမြန်လာရန် နှိုးဆော်
မြတ်စုမွန်| July 17, 2013
ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကလေးလူနာတဦးကို သူနာပြုများ ပြုစုနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စတိဗ် တက္ကနာ / ဧရာဝတီ)
ကလေးငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဝေဒနာ ခံစားရပြီး သွေးလန့်ခြင်းအတွက် ရန်ကုန်ကလေး ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဝါးများ လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို ဖြည့်တင်းထားပြီဖြစ်ရာ ငွေကြေး အဆင်မပြေမှုကြောင့် ဆေးရုံ အရောက်နောက်ကျခြင်း မဖြစ်စေလိုကြောင်း ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“မိဘတွေကို မှာချင်တာက နိုင်ငံတော်က ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အလုံအလောက် ဖြန့်ဖြူးပေးထားတာ ရှိတယ်။ ကလေး ဆေးရုံမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့၊ ဆေးသွင်း ကုသရမယ့် ဆေးပုလင်းတွေ လုံလောက်တာထက် ပိုလျှံပြီး ရှိတယ်။ ဆေးသွင်းပြီး ကုသရမယ့် ငွေရေးကြေးရေး ကုန်ကျစရိတ် မလိုဘူး။ ဒါကြောင့် ဆေးရုံသွားရင် ငွေကုန်မှာပဲ ဆိုပြီးတော့ ဒီ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အတွက် ငွေရှာပြီးမှ မလာပါနဲ့၊ စိတ်ပူတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းသာ လာခဲ့ပါ” ဟု ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကို ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ယခု ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွက် ကျပ် သိန်း ၁၅၀၀ ချထားပေးကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဋ္ဌာနစိတ်မှ သိရသည်။
“သွေးလွန်တုပ်ကွေးက ၄ နှစ်တကြိမ် အဖြစ်များတယ်။ ဒီနှစ်နည်းနည်း အဖြစ်များတဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော်က ဘတ်ဂျက်နဲ့ ရေထဲမှာခပ်တဲ့ အဘိတ်ဆေး ခတ်ဖို့နဲ့ ဆေးမှုတ်ဖို့ ဘတ်ဂျက် ချပေးတယ်” ဟု သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဌာနစိတ်မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာနီနီအေးက ပြောသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ သွေးလန့်ခြင်း လက္ခဏာသည် ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီအထိ ကြာတတ်ပြီး စောလျဉ်စွာ ကုသမှု မရရှိပါက အသက်သေဆုံးနိုင်သည်အထိ ဖြစ်တတ်ရာ၊ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင် ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောသည်။
“နောက်ကျပြီး မလာနဲ့၊ နေ့နေ့ ညညမရွေး ချက်ချင်း လာခဲ့စေချင်တယ်။ သွေးလန့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိရင် မစောင့်ပါနဲ့။ ချက်ချင်းလာပါ။
ညမိုးချုပ်နေပြီ၊ ဒီအချိန်သွားလည်း ဆေးရုံမှာ ဘယ်သူမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မနက်ကျမှ သွားမယ် မလုပ်ပါနဲ့။ စပြီး သွေးလန့်တဲ့ အချိန်နဲ့ စနစ်တကျ ဆေးသွင်းကုတဲ့အချိန်ကဝေးလေလေ၊ ကြာလေလေ ကလေးသေဖို့ များလေလေပဲ။
၁၂ နာရီကျော်သွားရင်သိပ်မကောင်းဘူး။ ၂၄နာရီကျော်သွားရင်မကောင်းဘူး၊ ၄၈နာရီကျော် သွားရင်တော့ သေဖို့များသွားပြီ” ဟု ဒေါက်တာသန်းထိုက် က ရှင်းပြသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့် အပြင်းအထန် ဖျားနေသည့် အချိန်သည် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသောအချိန် မဟုတ်သေးဘဲ၊
ရုတ်တရက် အဖျားကျပြီးနောက် ကလေးငယ်၏ ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် အောက်ပိုင်း ခြေနှင့် လက်များ အေးစက်စေးထန်း နေခြင်း၊ ဆီးသွားနည်းလာခြင်း၊ အဖျားကျသွားသော်လည်း ကလေးသဘာဝ ဆော့ခြင်း၊ အစာစားခြင်းများ မပြုလုပ်ခြင်း၊ မကြာ ခဏ ဗိုက်နာခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ နားနှင့်နှာခေါင်းမှ သွေးလျှံခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ ရာသီသွေးဆင်းခြင်း၊ အမည်းရောင် ၀မ်း သွားခြင်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့တွင် အနီစက်များ ပေါ်လာခြင်းတို့သည် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော သွေးလန့်ခြင်း လက္ခဏာများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေး သွေးလန့်ခြင်းကြောင့် ၁ ပတ်ကြာဆေးရုံ တက်ခဲ့ရသည့် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်တင်နွယ်ဦးက “သမီးလေး ဆေးရုံတက်ရတာ ၁ ပတ်တိတိ ကြာတယ်။ နှာခေါင်းသွေးလျှံတဲ့ အဆင့်အထိ ဖြစ်တယ်။ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆရာမတွေ အရမ်းကို ဂရုစိုက်တယ်။ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆေးသွင်းဖို့အတွက် ဆေးဝယ်စရာ မလိုဘူး။ ဆေးရုံက ဆေးတွေနဲ့ပဲ ကုပေးတယ်။ ဆေးရုံမှာ မရှိတဲ့ ဆေးတချို့လောက်ပဲ အပြင်ဆိုင်မှာ ၀ယ်ရတယ်။ တပတ်လုံးမှာမှ ဆေးဖိုး ကျပ် ၂ သောင်းလောက်ပဲ ကုန်ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကုန်အထိ ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် တက်ရောက် ဆေးကုသခံခဲ့သူ ၁၇၂၇ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၇ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်တဲ့ရောဂါ သို့မဟုတ် သွေးလွန်တုပ်ကွေး
အ၀ါရောင်နှင့် ကော်ဖီရောင် အရည်များကို ဆက်တိုက်အန်ကာ၊ နှာခေါင်းမှ သွေးများ လျှံထွက်လာသည်အထိ ခံစားနေရသော သမီးဖြစ်သူကို ကြည့်ရင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် ငိုခဲ့ရသဖြင့် ဒေါ်တင်နွယ်ဦး၏ မျက်လုံးများက ဖောင်းမို့၍ နေလေသည်။
၈ နှစ်အရွယ် သမီးအမြွှာနှစ်ဦး၏ မိခင် ဒေါ်တင်နွယ်ဦးတယောက် ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန် အိမ်ပြန်ရောက်လာသော အကြီးမလေး၏ အပြုအမူကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်သွားခဲ့ရသည်။ နေ့လယ်က စားသွားသည့် ထမင်းများကို ဆက်တိုက် အန်နေသော သမီးကိုခေါ်ကာ ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ ပြေးခဲ့သည်။ ကလေး ဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ပြီးနောက် သမီးကြီးမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သွေးလန့်ရောဂါဖြင့် တက်ရောက် ကုသ ခံခဲ့ရသည်။
“တပတ်ရှိပြီ။ ခုချိန်အထိ တရက်မှ မအိပ်ရသေးဘူး။ အစာလည်း မ၀င်တဲ့ သူ့ကိုပဲ ထိုင်ကြည့်ပြီး ငိုနေရတော့တာ” ဟု ဒေါ်တင်နွယ်ဦးက ပြောသည်။
အသက်အန္တရာယ်ကြားမှ ပြန်လည် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည့် သမီးသည် တပတ်အကြာ ဆေးရုံတက် ကုသခံရပြီးနောက် ရောဂါ ပျောက်ကင်းကာ နေအိမ်သို့ ပြန်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း နောက်တနေ့တွင် အမြွှာသမီး အငယ်မလေးက ထိုရောဂါဖြင့်ပင် ထပ်မံဆေးရုံ တင်ခဲ့ရပြန်သည်။
ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီး၏ ဆေးကုသဆောင် ၂၊ အခန်း ၂ ထဲသို့ ၀င်သွားလိုက်သည်နှင့် ကလေးလူနာများ၏ နွမ်းနယ်သော်လည်း ချစ်စရာကောင်းပြီး ဖြူစင်သည့် မျက်နှာလေးများ၊ လူနာရှင် မိဘများ၏ စိုးရိမ်ပူပင်သော မျက်နှာများကို မြင်တွေ့ရ ပေလိမ့်မည်။
ကလေးလူနာများ၏ ခုတင် သေးသေးလေးများ အကြားတွင် တာဝန်ကျသူနာပြုများ သွားလာ လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။ အခန်း ၂ အတွင်းရှိ လူနာ ခုတင်လေးများတွင် ကလေးငယ်များက နေရာလပ်မကျန်ရှိအောင် ပြည့်နေသည်။
ဆေးသွင်းစဉ် ကလေးငယ်က ရုန်းကန်သဖြင့် ဆေးထိုးအပ် လွတ်ထွက်မသွားစေရန် သစ်သားပြားလေးများကို ပတ်တီးဖြင့် တွဲပတ်ထားသည့် လက်ဖ၀ါး ငယ်ကလေးများကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ယခုနှစ်စမှ ဇွန်လကုန်အထိ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့သော ကလေးလူနာပေါင်း ၁၇၂၇ ယောက် ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၇ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီး၏ စာရင်းများအရသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အဖြစ်အများဆုံး မြို့နယ်များမှာ သံလျင်မြို့နယ်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် အစွန်အဖျား မြို့နယ်များ ဖြစ်သည်။
“ဒီနှစ်က အဖြစ်များတယ်။ မနှစ်က တနှစ်လုံးမှာမှ ၁၁၄၄ ယောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ် အခု ပထမ ၆ လတင်ကို ၁၇၀၀ ကျော်သွားပြီ” ဟု ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ပြောသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့် အပြင်းအထန် ဖျားနေသည့် အချိန်သည် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသောအချိန် မဟုတ်သေးဘဲ၊ ရုတ်တရက် အဖျားကျပြီးနောက် ကလေးငယ်၏ ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ် အောက်ပိုင်း ခြေနှင့်လက်များ အေးစက်စေး ထန်းနေခြင်း၊ ဆီးသွားနည်းလာခြင်း၊ အဖျားကျသွားသော်လည်း ကလေးသဘာဝ ဆော့ခြင်း၊ အစာစားခြင်းတို့ မပြုလုပ်ခြင်း၊ မကြာခဏ ဗိုက်နာခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ နားနှင့် နှာခေါင်းမှ သွေးလျှံခြင်း၊ သွားဖုံးမှသွေးထွက်ခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ ရာသီသွေး ဆင်းခြင်း၊ အမည်းရောင် ၀မ်းသွားခြင်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့တွင် အနီစက်များ ပေါ်လာခြင်း စသည့် လက္ခဏာတို့သည် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော သွေးလန့်ခြင်း လက္ခဏာများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ သွေးလန့်ခြင်း လက္ခဏာသည် ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီအထိ ကြာတတ်ပြီး စောလျဉ်စွာ ကုသမှု မရရှိပါက အသက်သေဆုံးနိုင်သည်အထိ ဖြစ်တတ်ရာ၊ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် ကြောင်း အထက်ပါဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် သွေးလန့် ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပွားပါက ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း များသို့ မသွားဘဲ၊ ကလေးငယ်များအတွက် သီးသန့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အစိုးရ ကလေးဆေးရုံများနှင့် ကလေးဆရာဝန်များ တာဝန်ယူ ကုသပေးသည့် ဆေးရုံများသို့သာ တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူစေလိုကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်းပြသည်။
“ဖြစ်နိုင်ရင် အစိုးရဆေးရုံကိုပဲ လာစေချင်တယ်။ အပြင် ဆေးရုံထက်စာရင် အစိုးရ ဆေးရုံကိုပဲ တက်စေချင်တယ်။ ကလေး အထူးကုတွေ ရှိတဲ့ ဆေးရုံတွေ ရှိတယ်၊ ကလေးချည်းပဲ သပ်သပ် ကုတဲ့ဆေးရုံ။ ဒီဆေးရုံတွေမှာ တက်မယ်ဆိုရင် ဆရာတို့က ဒီ ကလေးကို ၂၄ နာရီ ကြည့်ပြီး ကုသပေးလို့ရတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဆရာတို့က ကလေးပဲကုတာ။ ကျန်တဲ့လူနာကို မကု ဘူးတဲ့အခါ ဒီကလေးကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ကုပေးလို့ရတယ်” ဟု ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကလေးလူနာများ သီးသန့်ကုသပေးသော ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကြီး အပြင်၊ အရှေ့ပိုင်း ဆေးရုံ၊ အနောက်ပိုင်း ဆေးရုံ၊ သင်္ကန်းကျွန်း ဆေးရုံ၊ အင်းစိန် ဆေးရုံ၊ တောင်ဥက္ကလာ ဆေးရုံတို့တွင်လည်း ကလေး အထူးကု ဆရာဝန်များနှင့် ကလေးသီးသန့် လူနာဆောင်များရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ဆက်လက်၍ “ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာ ကလေးချည်းပဲ သီးသန့်ကြည့်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေမရှိဘူး။ ကလေးချည်းပဲ သီးသန့်ကြည့်ပေး၊ ကုပေးတဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်တွေက တရက်မှာ တကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် လာကြည့်နိုင်တယ်။ သွေးလန့်နေတဲ့ ကလေးကို နေ့နေ့ ညည ၂၄ နာရီ တောက်လျှောက် ကြည့်ရတယ်။ ဒီကလေး အသက် ရှင်မလား၊ အသက်သေမလား ဆိုတာ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေက ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ပြီး ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်တယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူထားသော စာရင်းများအရ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးတွင် သွေးလွန် တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူ လူကြီး၊ ကလေး စုစုပေါင်း ၈၈၆၉ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၁၆ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဌာနစိတ်မှ သိရသည်။
“ကျမသမီးက သွေးလွန်တုပ်ကွေး သံသယရှိတာပါ။ တခြား ဆေးရုံတွေ တက်ရင်လည်း အခြေအနေ ဆိုးလာရင် ကလေး ဆေးရုံကြီးပဲ လွှဲမှာဆိုပြီး ဒီကိုပဲ တန်းလာလိုက်တာ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တန်း
မြို့နယ်မှ ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက် ဆေးကုသခံနေသည့် ကလေးမိခင်တဦးက ပြောသည်။
ကလေးများ သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတင် ကုသရတော့မည်ဆိုပါက အနည်းဆုံး သွေးလှူရှင် ၂ ဦးကို ကြိုတင် ရှာဖွေထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ဆိုသည်။
“ဆေးရုံက မဆင်းမချင်း၊ ကလေး မသေမချင်းမှာ ၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်အတွင်း လှမ်းခေါ်လို့ရမယ့် လူမျိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ထားဖို့လိုပါ တယ် တချို့ မိဘတွေက ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ သွေးကို သွင်းထားပေးပါ။ နောက်မှ ပြန်ဆပ်ပါမယ်ဆိုပြီး ပြောတာမျိုး ကြုံရတယ်။ သွေးဥမြွှာနည်းတဲ့ သွေးကို သွင်းမိရင် ကလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အရည်တွေ များလာတာပဲရှိမယ်၊ အကျိုးမရှိဘူး” ဟု ရန်ကုန် ကလေး ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာသန်းထိုက်က အကြံပြုသည်။
ဆေးရုံတွင် သိုလှောင်ထားသည့် သွေးမှာ သွေးဥမြွှား ပမာဏ နည်းပါးပြီး သက်တမ်းတိုသောကြောင့် သွေးဟောင်းထက် စာလျှင် သွေးအသစ်ကို သွင်းစေလိုကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး လူမမာရှင်များ အနေဖြင့် သွေးလှူရှင်များကို ကြိုတင် ရှာထားစေချင်ကြောင်း၊ ဆွေမျိုးနီးစပ်မှ ဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာ သံဃာတော်၊ သီလရှင်များဖြစ်စေ ထံမှ ရှာထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သွေးလိုသည့် အချိန်မှ သွေးထွက်ရှာပါက အချိန်မမီခြင်း ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ကြိုတင်ရှာထား စေလိုကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ပြောသည်။
“သွေးက သန့်ဖို့တော့လိုတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကောင်းသွားပြီး တခြားရောဂါတွေ ကျန်ခဲ့လို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ ဖောက်ပြီး စစ်ပြီး တခြားရောဂါတွေ မရှိဘူးဆိုမှ သွင်းရတယ်။ အဲဒီအတွက် နာရီဝက် တနာရီ ကြာပါတယ်။ သွေးရှာတာနဲ့တင် ၁ နာရီလောက် ကြာတယ်ဆိုရင် ကလေးအတွက် မကောင်းဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းပြီဟုအထင်နှင့် ဆရာဝန်များ ခွင့်မပြုသေးဘဲ ဆေးရုံမှ ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ် ဆင်းသွားသည့် အဖြစ်များလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဆေးရုံတင်ထားတာဟာ ဖမ်းတာလည်း မဟုတ်၊ ထောင်ချတာလည်း မဟုတ်၊ သူတို့ သားသမီးကို အသက်ကယ်ဖို့။ သူတို့က စိတ်မပူရတော့ဘူးဆိုရင် ဆေးရုံက ခိုးဆင်းသွားကြလို့ ဒေါင်းတောက်အောင် လိုက်ရှာရတယ်” ဟု ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က ပြောသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဝေဒနာသည် အဖျားကျချိန်တွင် စိုးရိမ်စရာ ရှိသောကြောင့် အဖျားကျရုံဖြင့် ဆေးရုံမှ ဆင်း၍ မရကြောင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးလန့်မလန့် စောင့်ကြည့်ပြီး ၂ ရက် အကြာတွင်မှ ဆေးရုံမှ ပေးဆင်းလေ့ ရှိကြောင်း၊ သွေးလန့်ပါက ကု၍ ပြန်လည် ကောင်းမွန်ပြီး ၂ ရက်၊ ၃ ရက်အကြာမှ ပေးဆင်းကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“Second Shock ဆိုတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒါကို စိတ်ပူတယ်” ဟု ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ် သွေးလွန်တုပ်ကွေး အဖြစ်အများဆုံးဒေသများမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်တို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယခင်က ကလေးငယ်များသာ အဖြစ်များသည့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးသည် လူကြီး များတွင်ပါ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သားသမီး ၆ ယောက်မိခင် ဒေါ်တင်နွယ်ဦးက “ကျမကလေးတွေ တယောက်မှ သွေးလွန်တုပ်ကွေး မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ အခု ဒီ
အမြွှာ ညီအစ်မအလှည့်ကျမှ ဖြစ်တာ” ဟု ပြောသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးသည် ခြင်ကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ကူးစက်ရောဂါများ အနက် တခုဖြစ်ရာ ခြင်ပေါက်ဖွားခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်သည့် ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဌာနစိတ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ နီနီအေးက ပြောသည်။
သန်လျင်မြို့နယ်တဝိုက် ခြင်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ဆေးမှုတ်ခြင်းများကို စေတနာ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် သန်လျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့မှ ကိုဘီလီက “ကျနော်တို့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် စက်ဝယ်တယ်၊ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဖြန်း ပေးတယ်။ ရပ်ကွက်တွေထဲမှာတော့ နေရာတိုင်း လိုက်ဖြန်း မပေးနိုင်ဘူး။ ရောဂါ ဖြစ်တယ်ကြားမှ သွားဖြန်းပေးတယ်။ အခက်အခဲ ကတော့ ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေး မရှိတာ များတယ်။ ခြုံတွေ မရှင်းဘူး။ ရေဆိုး ပိတ်နေတာ တွေကို မရှင်းကြဘူး။ ဒီအတိုင်း တဦးတယောက်စီ လုပ်နေရင်တော့ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ သယ်ဆောင်နိုင်သည့် ခြင်သည် ရေကြည်ရေသန့်များတွင်သာ ပေါက်ဖွားနိုင်ရာ၊ ပိုးလောက်လန်း များ သေစေနိုင်သည့် အဘိတ်ဆေးကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်မိမိ ၀ယ်ယူကာ ခတ်သင့်ကြောင်း ကိုဘီလီက အကြံပြုသည်။
ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ပိုးလောက်လန်း သေစေနိုင်သော ဆေးများခတ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေး ဖြန်းခြင်း၊ ဆေးမှုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အစိုးရ ဘဏ္ဍာငွေများကို ယခုနှစ်မှစတင် ချထားပေးလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အနှံ့တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အတွက် ဆေးမှုတ်၊ ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ဆေးခတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် ပစ္စည်း ကိရိယာ စုံလင်စွာ ချထားပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ နီနီအေးက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများလာခြင်း၊ စာရင်း ပြုစုနိုင်မှု အားကောင်း လာခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်တက်လာသည်ဟု ထင်လာရပြီး သွေးလွန်တုပ်ကွေးသည် တခြား ကပ်ရောဂါများနှင့်အတူ ၄ နှစ်တကြိမ် ဖြစ်ပွားတတ်ရာမှ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ကပ်ရောဂါကာလ မဟုတ်သည့် အချိန်များ တွင်လည်း ဖြစ်ပွားလာကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုအခါ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဝေဒနာခံစားရပါက ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် ငွေကြေးကုန်ကျမှု မရှိဘဲ (burma.irrawaddy.org/archives/44053) ကုသ ခံနိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း သွေးဥသွေးမြွှားများ၏ အခြေအနေကို စက်ကိရိယာများဖြင့် စစ်ဆေးရသောကြောင့် ရုံးချိန်ပြင်ပတွင် ဖြစ်လာပါက ဝန်ထမ်းအင်အား မလောက်ငမှုကြောင့် ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စစ်ဆေးရသည့် ကုန်ကျစရိတ် ရှိနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ရှင်းပြသည်။
ကလေးဆေးရုံကြီးရှိ ကလေးလူနာဆောင်များတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြင့် တက်ရောက် နေသည့် ကလေးလူနာများ၏ ခုတင် ခေါင်းရင်းတွင် ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကလေးများကို ချိတ်ဆွဲထားကြသည်။ ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တဦးက သူ၏ လက်တွင် ချည်ထားသော သစ်သားပြားလေးကို ဆွဲဖြုတ်ရန် ကြိုးစားနေသည်။ တချို့ ခုတင်များတွင် လူနာစောင့်မှာ မိဘများ မဟုတ်ဘဲ သံဃာတော်များ ဖြစ်သည်။ လူနာက ကိုရင်လေးများဖြစ်သည်။
စီဝိုင်စီပိတ်စပေါ်တွင် ပန်းနုရောင်အပွင့်ရိုက် အင်္ကျီနှင့် နက်ပြာရောင် လုံချည် ခပ်နွမ်းနွမ်းကို ၀တ်ထားသည့် ဒေါ်တင်နွယ်ဦးက “အခု ကလေးတွေမြင်ရတာ သမီးအကြီးလေး လာတက်တုန်းက မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းထက်စာရင် တော်သွားပြီ။ အရင် တပတ်တုန်းက ဆိုရင် သွေးသွင်းရတဲ့ ကလေးတွေချည်းပဲ။ အခြေအနေလည်း ဆိုးကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
အိပ်ရေးပျက်သည့်ဒဏ်၊ မိခင် တယောက်၏ သောကကြောင့် သူ၏မျက်နှာက နွမ်းနေသည်။
ခုတင်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းနေသည့် သမီးအငယ်လေးကို ငေးကြည့်ရင်း ဒေါ်တင်နွယ်ဦးက “အငယ်လေးကတော့ အစားအစာ ၀င်တဲ့အတွက် အကြီးမလေးလောက် စိတ်မပူရဘူး” ဟု ပြောသည်။
အခွံခွာထားသော ပန်းသီးစိတ်ကို တမြုံ့မြုံ့ဝါးနေသည့် သမီးငယ်ကို ကြည့်ကာ စိတ်အေးရသော်လည်း၊ အိမ်တွင် ဖခင်နှင့် ထားခဲ့ရသည့် ဆေးရုံဆင်းခါစ သမီးအကြီးအတွက် စိုးရိမ်စိတ်က ယခုအချိန်အထိ ရှိနေသေးသည်ဟု သူကဆိုသည်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ ဆိုသည်မှာ ကလေးများတွင် အဖြစ်များသော ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါတစ်မျိူး ဖြစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များတွင် ကလေးများ၏အသက်ကိုအဓိက ဒုက္ခပေးနေသော ရောဂါ တစ်မျိူးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင်မူ ခြင်မရှိသောကြောင့် မတွေ့ရတော့ပါ။
သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဟာ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ။
သွေးလွန်တုတ်ကွေး virus ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း virus သည် ခြင်၏သွေးမှတဆင့် လူ၏ သွေးထဲသို့ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သွေးလွန်တုတ်ကွေး virus အမျိူးအစား လေး မျိူးရှိပါသည်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါပိုးကို သယ်ဆောင်ထားသော ခြင်ကိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Aedes ခြင် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ နေ့ဘက်တွင်ကိုက်တတ်ပြီး နေအိမ်ရှိ အလင်းရောင်ကွယ်သော နေရာများတွင် ပုန်းခိုနေတတ်ပါသည်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါတွင် အဆင့် လေးဆင့်ရှိပါသည်။
အဆင့်တစ်သည် သာမန် တုတ်ကွေးမိသကဲ့သို့သာ ဖျားပြီး နေပြန်ကောင်းသွားတတ်သည်။လက်မောင်းတွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းသော ကိရိယာဖြင့် ငါးမိနစ်ခန့် ခပ်တင်းတင်း စည်းထားပါက အနီအစက်အပျောက်များ ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ၎င်းကို Hess test ဟုခေါ်ပါသည်။
အဆင့်နှစ်တွင် အဖျားပိုကြီးလာသည့်အပြင် coffee ရောင်များ အန်ခြင်း၊ သွားဖုန်း သွေးယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ ၀မ်းမည်းမည်းများသွားခြင်း များဖြစ်တတ်ပါသည်။
အဆင့်သုံးတွင် အထက်ပါ လက္ခဏာများအပြင် ကလေးအရမ်းမှိန်းလာခြင်း၊ သတိလစ်သွားခြင်း၊ ခြေဖျားလက်ဖျားများ အေးစက်လာခြင်း များဖြစ်တတ်ပါသည်။ ၎င်း လက္ခဏာများသည် ကလေးတွင် shock (သွေးလန့်ခြင်း) ရတော့မည့် လက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်လေးတွင် သွေးပေါင်ချိန်နှင့်သွေးခုန်နှုန်း တိုင်းလို့မရတော့ဘဲ သွေးလန့်ခြင်းအဆင့်သို့ ရောင်သွားတတ်ပါသည်။
အဆင့်လေးဆင့်ရှိသော်လည်း ကလေးတိုင်းတွင် အဆင့်တစ်မှ လေးအထိဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အချို့ကလေးများတွင် အဆင့်တစ်သာဖြစ်၍ အချို့ ကလေးများတွင် အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အဆင့်တစ်ရောဂါရှိသောကလေးသည် ရုတ်တရက် အဆင့်သုံး/လေးသို့ ခုန်သွားတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပါက မပေါ့ဆသင့်ဘဲ ကလေးငယ်ကို သေသေချာချာ ပြုစုစောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါတွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမှာ shock ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးသည် ၅ ရက်မှ ၇ ရက် အထိ ဖျားတတ်ပြီး တုတ်ကွေး၏လက္ခဏာများကို ပြသပါလိမ့်မည်။ shock ရပါက ၃ ရက် မှ ၅ ရက် အတွင်းရတတ်ပြီး မိဘများက ကလေးကိုယ်ပူကျသွားသောကြောင့် ပေါ့ဆသွားတတ်ရာ အန္တရာယ်များလှပါသည်။ ကလေးမှာ အမှန်စင်စစ် ကိုယ်ပူကျသွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ shock ရသွားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုရက်များတွင် ကလေးကို အထူးဂရုစိုက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးကို စောင့်မကြည့်တတ်ပါက ဆေးရုံသို့သာခေါ်ဆောင်သွားစေလိုပါသည်။
ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြရင် ကလေးကို ဆေးရုံတင်သင့်ပါသလဲ။
ကလေးကိုယ် အရမ်းပူခြင်း – ကိုယ်ပူရှိန်ကြောင့် ကလေးတက်သွားတတ်ပါသည်။
ကလေး အရမ်းမှိန်းခြင်း – shock ရချင်သောလက္ခဏာဖြစ်ပါသည်။
ကလေးက ကော်ဖီရောင်များအန်ခြင်း၊ ၀မ်းမည်းမည်းများသွားခြင်း
အာဟာရပြည့်ဝအောင်မကျွေးဘဲ ဆန်ပြုတ် ခေါက်ဆွဲပြုတ်သာ ကျွေးခြင်း။
မက်ကလောင်ဖောက်ခြင်း – မက်ကလောင်ဖောက်သော နေရာမှ ရောဂါပိုးဝင်ပြီး သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် မသေဘဲ သွေးဆိပ်တက်သောကြောင့် သေရသော ကလေးပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
အညိုရောင်ရှိသော အစားအစာများ ဥပမာ coffee, milo, ovaltine တို့ကို မတိုက်ကျွေးပါနှင့် – ကလေးသွေးအန်ပါက သွေးအရောင်နှင့် ခွဲခြင်းရခက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ကလေးကို ခြင်မကိုက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
-Posted byဇီဝက (ဆေး-၂)at1:58 AM
Dengue cases hit record high of 853 last week
Eugene Neubronner-25 June
SINGAPORE — The number of weekly dengue cases hit an all-time high of 853 last week, quashing online speculation that the haze had blunted the march of the mosquito-borne disease.
The number also reversedahopeful dip the previous week, when numbers fell for the first time in 11 weeks to 810 cases. The previous high was 814 reported cases at the start of this month. The total number of cases this year stands at 10,960 as of last week, with two deaths recorded.
Commenting inaFacebook post, Environment and Water Resources Minister Vivian Balakrishnan said: “We still had 853 cases of dengue last week — so there is no basis for the theory that haze would reduce the mosquitoes.”
The current strain of dengue is fromanew serotype, or sub-group, and is propagating faster than previous strains.
Responding to queries onapossible link between dengue and the haze, the National Environment Agency (NEA) yesterday said “there is no evidence to support the hypothesis that haze may reduce the impact of dengue”.
A study published in 2010 by the National University of Singapore (NUS), Duke-NUS Graduate Medical School, Tan Tock Seng Hospital and Singapore Clinical Research Institute had found “no association between dengue activity and haze”.
Another scientific correspondence between Duke-NUS, DSO National Laboratories, NUS, University of Hawaii and the NEA’s Environmental Health Institute pointed out that though there was haze from 1997 to 1998, “the number of dengue cases (here) during those years were the highest recorded in the 1990s”. “Dengue cases were also similarly high in other South-east Asian countries during the period,” the NEA added.
The NEA said it is adopting “appropriate precautionary measures” against the haze for the health and safety of its dengue inspectors and control operations over dengue will continue with “minimal disruptions”.
All NEA officers tasked with checking public areas and outdoor sites will have N95 masks. Older NEA officers and those with respiratory and heart problems have been advised to be mindful of their health and report to supervisors if they encounter difficulty working outdoors and to seek medical attention if they feel unwell.
Number of dengue cases onadecline
By NG JING YNG-16 July
Weekly reported cases fall to 544 last week, lowest in almost three months: MOH
SINGAPORE — The number of dengue cases fell for the third consecutive week to 544 cases last week, the lowest rate in almost three months, according to latest figures from the Ministry of Health (MOH).
Nevertheless, there are 109 active dengue clusters as of yesterday — an increase from the 80 reported last week. These clusters are spread across the island with 34 clusters recorded as high-risk areas with 10 or more cases.
The weekly number of dengue cases has been declining since reaching an all-time high of 842 in the third week of last month.
Previously, the authorities had warned that dengue cases were expected to exceed 1,000aweek. Still, the National Environment Agency (NEA) stressed that the number of dengue cases remain high.
“It is thus too early to tell if the drop in cases will be sustained, particularly when we are still in the peak dengue season,” said an NEA spokesperson.
Associate Professor Leo Yee Sin, Director of Tan Tock Seng Hospital’s Communicable Disease Centre, reiterated that it will be “too quick” to conclude at this juncture that the peak of the epidemic is over. She explained that the typical dengue season here starts from around May to September.
Assoc Prof Leo said: “We need to continue to be vigilant, on high alert against mosquito breeding, and have good knowledge and put in place control measures in order to protect ourselves and our loved ones.”
So far, five people here, including one patient who contracted the mosquito-borne disease overseas, have died from it. The latest cumulative number of cases stand at 13,049.
In 2005, when the worst dengue outbreak hit Singapore, 14,209 people were infected and 25 died.
Between 2010 and last year, there wasalower incidence of dengue but the cases occurred all year round
Since dengue numbers escalated earlier this year, the Government has hired more officers to step up checks on the ground and increased publicity efforts, among other things.
Urging Singaporeans to continue with dengue prevention efforts, the NEA spokesperson said that mosquito repellents will be distributed to students from Monday with priority given to schools in the dengue clusters.
The NEA has set aside an estimated S$85 million to combat dengue for the current financial year and the authorities plan to distribute 1.2 million insect repellents to all households and schools.
Between Sunday and 3pm yesterday, there were 73 cases.
ADDITIONAL REPORTING BY NEO CHAI CHIN AND WOO SIAN BOON
Dengue fever isamosquito borne disease caused by dengue virus which is usually self limiting in most cases. However, in some people it can present with life threatening complications such Dengue Shock Syndrome and Dengue Haemorrhagic Fever. Dengue is not contagious and does not spread from person to person by physical contact. The most effective way of preventing dengue fever is by taking precautions to avoid being bitten by mosquitoes.
Tags:Dengue fever, Dengue haemorrhagic fever, Dengue shock syndrome, mosquito borne disease, Aedes mosquito
Posted by Ko Nge at Sunday, July 21, 2013
OCBC Blue Chip စတော့ ရှယ်ရှာလေးတွေ မိမိငွေလစဉ်ဒေါ်လ...
OCBC banking services will be disrupted between 8 ...
၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ စင်္ကာပူမှာအလုပ်လက်မဲ့လေးတွေ တဖြေးဖြေး...
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်အချို့ ကျောင်းဝင်ခွင့်...
ဘယ်လိုဘဏ်တွေမှာ ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် ငွေချေးမလဲ?
ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအသောက် ၅ မျိုး
လူကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးကြရ...
ယောကျာ်းလေးတွေ အလွန်ကြောက်သော ဒီလိုမိန်းမလေးများ!
လူငယ်တွေအတွက် အတုယူစရာ အာဂသူရဲကောင်းမလေး!
အတုယူစေချင်တဲ့ စကာင်္ပူက သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ ပညာပေ...
စကာင်္ပူမှာ အိမ်ဝယ်ချင်ရင် ဘယ်လိုချေးငွေတွေယူရမလဲ?
အလွန်အသက်အန္တရယ်များတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး (Dengue)! ...
အမြင့်ပျံ ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေနှင့် တိုက်ခန်းဈေးကွက်...
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း မတော်တဆမှု ယာဉ်မောင်းကြောင့် အဖြ...
ဘိန်းဘုရင်လုို့ နံမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဦးလော်စစ်ဟန်ရဲ့ ...
စင်ကာပူတွင် ပညာရေး အထောက်အထား လိမ်လည်မှုဖြင့် နိုင်...
စကာင်္ပူကဘယ်ဘဏ်တွေမှာ ချေးသင့်တယ်ဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်...
Amazing Baby Swiming
iphon5ကိုင်တဲ့သူတွေသတိထားစေချင်!
ဟန်ဆောင်လက်ထပ်သူ မြန်မာနှစ်ဦး စင်ကာပူတွင်ထောင်ကျ
နိုင်ငံခြားရောက် ရွှေတွေအတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး...
Wrinkles မျက်နှာ အရေးအကြောင်းတွေ သက်သာချင်ရင်
ပြည့်တန်ဆာ ဆိုတာ တရားဝင် ဖြစ်သင့်ပါသလား!
အရည်အသွေးကောင်းလို့ ဈေးကောင်းရတဲ့ မန်းစိန်တလုံးသရ...
Myanmar Cycling Tour!
စင်ကာပူရောက် မြန်မာလူမျိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော...
ညဖက်ချောင်းထထဆိုးတတ်တဲ့ သိုင်းရွိုက်အကျိတ်လေး ဘြာေ...
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီ မမှန်ရင် ဖ...
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရေး သဘာဝ နည်းလမ်း ၁၀ ဖြာ
မြန်မာစီးပွားရေးသည် အာရှ၏ နောက်ထပ် ကျားတကောင်ဖြစ်န...